eBike News: eCargo Kama rugbọala, eBikepacking Scotland, Charging Stations, Retro eCruiser, & More!
N'ime akụkọ eBike izu a:
C eCargo bike Kama Etu Etu NYC
● Citi e kediegwu Cft eBikes laghachi na NYC?
Shel Autolyspine Vintage Electric Shelby
ECargo si Repower & Schaeffler
B eBikepacking Scotland Video
Ga-ekwe omume mgbanwe eCargo nke Europe
B eBike Charging Stations na Switzerland Alps
● Ma Ọtụtụ Ihe!
Akụkọ isi okwu
eCargo Bikes Kama Ọdụ ụgbọ ala maka NYC
Ozi ọma banyere ọnọdụ e-bike na New York City na-abịa n'isiokwu a New York Times. Ọ kọwara etu 'mmemme obodo ọhụrụ siri chọọ iji dochie ụfọdụ ndị a (ike ọdịnala mmanụ ụgbọala) na-ebugharị ụgbọ njem na ọnọdụ mmebi nke dịkarịsịrị gburugburu ebe obibi na ọ naghị arụ ọrụ n'okporo ụzọ ikuku: ụgbọ ala eletriki.
Ọ ga-abụ oge mbụ obodo… .hapụrụ kwalitere ụgbọ ala ebuka dị ka ihe ọzọ na gwongworo ndị na-ebuga ha. Dị ka ihe dị ka 100 ịnyịnya na-enyere bọl na aka nke Amazon na-arụ, a ga-ahapụ UPS na DHL ka ha nwee ike ịpasa ụgbọ mmiri n'ọtụtụ narị azụmaahịa azụmahịa dị adị nke edobere maka gwongworo na nza. N'adịghị ka ụgbọ ndị ahụ, anyịnya igwe agaghị akwụ mita. '
Edemede a gbakwụnyere 'a ga-ahapụkwa ohere iji ụgbọ ala na-adọba ụgbọala dị n'akụkụ ụzọ, na sọlfọ niile nwere ike ịga n'okporo ụzọ obodo na-eto eto karịa kilomita 1,400. A ga-adọrọ ụgbọ anyịnya n'akụkụ ndị Manhattan na-agbachikarị, site na 60th Street ndịda ruo Batrị. '
Na New York, Amazon ebubatalarịma ya na ụgbọala na-adọkpụ maka nnyefe dum nri na Manhattan na akụkụ nke Williamsburg na Brooklyn.
UPS na DHL ga-arụ ọrụ ụgbọ ala n'obodo na nke mbụ ha.
Citi Bita nke Lyft nke dị nso na-alaghachi New York?
Icylọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ndị Ọrụ Na-ahụ Maka Ndị Ọrụ na Ndị na-ere Ego Ego na-ekwupụta na 'Lyft dị nso ịmaliteghachi mmegharị e-keke n'ime sistemụ igwe kwụ otu ebe ya na batrị na breeki', na-ezo aka na blog Citi Bike.
Citi Bike withdrawls were were laa azụ n’April mgbe ụfọdụ ndị na-anya ụgbọ elu kọrọ akụkọ banyere oke mgbatị ihu.
Nke a sotere na July site na mkpochapụ elele na oke nke Lyft na San Francisco mgbe akụkọ banyere ọkụ batrị.
N'ihi ya, Lyft kwuru na ya na ndị na-enye batrị ọhụrụ na-arụ ọrụ.
A na-ele anya na nrụgharị ebugharị na New York ga-emeghe ụzọ maka inwekwu ihe ịga nke ọma dịka, ruo mgbe ọrụaka teknụzụ, Citi Bikes eletrik gosipụtara nke ukwuu.
Enwere ozi ọma ọzọ maka ndị na-ekenye ndị na-egwu e-bike - mbido ọnwa a, Lyft na Franciscolọ Ọrụ ationgbọ njem Ọchịchị San Francisco kwetara na nkwekọrịta afọ anọ ọhụụ.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịma ihe niile gbasara mbilite n ’e-igwe kwụ otu ebe wee lelee edemede anyị gbasara microromobility na-ekerịta ebe a.
eBikes & eBike Systems News
Retro Auto Inspired Vintage Electric Shelby
Vintage Electric Shelby Bicycle sitere na ụlọ ọrụ a na-ahụ maka Santa Clara na-enye ọmarịcha ụgbọ ala ọgbara ọhụrụ ma bụrụ nke kachasị ọhụrụ n’usoro ha nke e-keke ochie.
Companylọ ọrụ ahụ na-ekwu na 'igwe kwụ otu ebe a dị 48-volt Shelby trottle ịkwụ ụgwọ Carroll Shelby nke igwe ọla aka 289 Slabside' - a na-amara Shelby maka njiri ụgbọ ala ha na-arụ ngwa ngwa kemgbe 1960s.
Igwe igwe kwụ otu ebe nwere otu ụdị agba agba N6 si acha anụnụ anụnụ dị ka Coroll's Cobra, na matte ojii gbara agba na akara ngosi Shelby n'akụkụ Cobra badging.
Lelee vidiyo ahụ nke na-enye nkọwa ndị ọzọ gbasara ndabere ụlọ ọrụ ahụ.
Powerlọ ọrụ Switzerland Power Show Show Bikes abụọ Ego
Bike Europe na-akọ na Repower, onye na-emepụta Switzerland na onye na-ekesa ọkụ eletrik, gosipụtara mgbakwunye kachasị ọhụrụ na njikọta eletrik eletrik na-akpọ Homo Mobilis n'ụdị e-cargobikes abụọ; na Lambronigo na Lambrogino.
Abụọ na-abụba ụgbọala na-enyere aka na ụkwụ, na-elekwasị anya na ihe ndekọ njem ikpeazụ n'ime obodo mepere emepe, mana na-elekwasịkwa anya n'iji na nnukwu ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
Bike Europe gbakwụnyere na 'Repower na-ekesakwa ọtụtụ ngwaahịa ndị ọzọ dị ịtụnanya dịka ọkụ ọkụ n'èzí nke Paline; tagzi mmiri a na-akpọ Rebout na Ọdọ Mmiri Garda yana ebe a na-akwụ ụgwọ maka nkwari akụ…. '
Schaeffler gụsịrị ule mbụ
A na-ahụta Schaeffler Bio-ngwakọ dị ka e-bike mgbe niile n'agbanyeghị na enwere obere ụgbọ ala ma ọ bụ ụgbọ nnyefe.
Dịka e-igwe kwụ otu ebe enwere ike ịgbagharị n'okporo ụzọ igwe kwụ otu ebe yana n'okporo ụzọ - na mkpirisi, a na-ahapụ ya ka ọ bụrụ ebe ọ bụla ọzọ ka a ga-ekwe ka e-keke.
Electrive na-agwa anyị na ndị rụpụtara German Schaeffler ejirila pedelec Bio-Hy ngwakọ mezue ule nke mbụ.
Scheduledgbọala elekere anọ nwere ụkwụ ọ ga-abanye n’usoro amịpụta na njedebe nke 2020.
Ebe obibi ndụ ga-adị na windo ihuenyo, ọ ga-enwe ya ma ọ bụrụ na e nwere oche nke abụọ, igbe nwere ikike nke 1,500 lita ma ọ bụ dị ka ụdị nnabata na mpaghara ibu.
Electrive gwara anyị na 'Dịka onye nrụpụta si kwuo, ụdị modul nke ụdị ibu na-enyere ngwa ndị pụrụ iche aka, dị ka ụlọ kọfị ma ọ bụ gwongworo friji. Ewezuga ngwa ndị pụrụ iche dị otú a, Bio-ngwakọ ergo nwere ike akara ọma ọfụma n'ụgbọ njem ndị njem, n'ụlọ ọrụ mmepụta ihe na nke kampoo na ọrụ na ọgbakọ. '
Ngwakọta - Gịnị kpatara ha ji wepụta ahịa eBike?
Anyị kọrọ na etiti ọnwa November otu onye na-arụpụta taya, ma onye nrụpụta usoro 48-e-bike mid system na-apụ na ahịa e-bike.
Bike Europe butere akụkọ a na-adọrọ mmasị na nso nso a nke e-bike guru Hannes Neupert katọrọ mkpebi ahụ 'na ụyọkọ ọkọnọ mmanụ ụgbọ ala nọ na nnukwu nrụgide n'ihi ngbanwe ụgbọala eletrik. "Ọ na-eduga na mkpebi ndị amamihe na-adịghị na-eme ka nrụgide dịgide ndụ." Ọ nweghị ihe ọ bụla metụtara ahịa e-bike / pedelec nke, ka ọ na-ekwu, "ka nọ n'oge a na-agba akwụkwọ ọta akara. Yiri n'ahịa ekwentị na 1995 '.
Scottish eBikepacking Adventure
Lelee vidio a dị oke mma na njem e-keke dị ịtụnanya na gburugburu Scottish Cairngorms na e-anyịnya igwe Riese & Muller Superdelite. Ọ dị ka Ike na Megan Fazzio si San Diego Fly Rides nwere ezigbo njem ezumike!
E-anyịnya igwe bụ Vgbọ njem ọhụrụ - na Europe ọ ga - eduga n'ụzọ ahụ?
Edemede a Forbes na-akọ nkọ ma, na-esochi ọfụma na ajọọ ahịa ahịa igwe kwụ otu ebe na China, ma 'ihe ọzọ na-esote' na micromobility ga-abụ ụgbọ ala eletriki eletrik, gụnyere igwe e-ebu, iji dochie oke arọ, mmetọ. gas na-ebugharị mmanụ ụgbọala.
Nke a na-emetụta ọnọdụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọhụụ na Europe. Edemede a na –eme ngbanwe, nke Lauha Fried, Onye isi otu ụlọ ọrụ na-ahụ maka ịgba ịnyịnya na Europe, bụ ụlọ ọrụ igwe kwụ otu ebe Europe dere, 'Onye a hoputara Ursula von der Leyen chọrọ Europe ka ọ bụrụ obodo mbụ mbụ na-anọpụ iche ihu igwe.
Ọ na-enye ọtụtụ ozi dị mma banyere igwe na e-anyịnya na Europe. Dịka ị pụrụ ịhụ site na ibe akụkọ ha, ha na-achọ bulie ijeri euro abụọ maka ọrụ akụrụngwa Europe na-ahụ maka gburugburu. Chaị!
Otu UK nwere ike isi nwetakwu ndị mmadụ na bọọlụ
Ampler na-eme ka ndị dị n'obodo ukwu dị brọsh. N'okwu Bike Biz a na-adọrọ mmasị Ott Ilves na-ele anya na ihe UK nwere ike ime iji bido ịgba ndị ịgba ọsọ Dutch dị elu ama ama.
O kwenyere na 'nchekwa na idi ka nkpa. Ihe ọ maara nke ọma bụ na 'Safezọ igwe kwụ otu ebe, ihe dị iche iche bụ ihe na-enyekwu ndị mmadụ nọ na keke.'
Agbanyeghị, ọ na-ahụkwa ihe ndị ọzọ dị mkpa na-anaghị ekwukarị oge.
Na mbu enwere iwu nlezi anya na Netherlands nke na echekwa ndi n’egbo uzo site na ndi ori, nke na eme ka ndi oria kpachara anya.
Nke abuo, igba ugbo ala bu ihe anaghi adaba n ’otutu obodo Dutch na nke Bel, Ilves n’atughari‘ Gbalia igba oso n’etiti obodo Amsterdam ma obu Ghent. N’oge na-adịghị anya, ị ga-enwe nkụda mmụọ n’ihi enweghị oghere na-adọba ụgbọala na ọnụ ahịa ebe a na-adọba ụgbọala, na mmetụta nke ịbụ onye nke abụọ n’ụzọ ọ bụla, gụnyere ije, ịgba ígwè na njem ọha. '
Nchaji Station Network Central Switzerland
Edemede a nke German na-akọwa netwọkụ ịkwụ ụgwọ e-igwe kwụ otu ebe ana-etolite na Uri, mpaghara nchịkwa Switzerland a maara dị ka Canton nke dị na etiti Alps Switzerland Alps dị egwu.
Ọ na - agwa anyị na site na enyemaka ego nke Canton nke Uri na gọọmentị etiti na a na-ewulite netwọkụ na-akwụ ụgwọ maka e-keke n'ofe niile nke Uri.
IGlọ a bụ IG Bike Uri, esetịpụla onwe ya ihe mgbaru ọsọ nke ịwụnye ọdụ ụgbọ ala 32 n'okirikiri igwe kwụ otu ebe dị kilomita 550 nke jikọtara mpaghara.
Nke a bụ naanị ọnụ ọnụ nke ọdụ ụgbọ oloko n'agbanyeghị. Bike Energy akara ngosi nke ebe a sitere na ulo oru Austrian Elektrizwerk Altdorf (EWA) AG.
Enwere ugbu a ihe karịrị 10,000 ụlọ ọrụ igwe eji agba ọkụ elele elele na igwe elele na Europe na 100 n'ime Switzerland.
Obodo dị nso na Ticino na mpaghara njegharị Surselva nwere ọdụ ụgbọ mmiri igwe kwụ otu ebe. Ebe nrụọrụ Uri si eme ihe bụ ebe a.
Iji uru n'ụlọ ọrụ ndị chajị, ịchọrọ naanị ụdọ nkwụba ọkụ dakọtara nke enwere ike ịzụta ma ọ bụ gbazite na mpaghara na-ekwu.
A na-ahụ ọkwa chajị dị ka ntinye ego na-emepụta nlọghachi; ebe ndị na-e-e-keke na-eji obere eletrik eletrik eletrik eletrik na ha nwere ike na-etinyekwu ego na cafe mpaghara….
Akuko na-ewelite nchekasị nke ndị na-agba ịnyịnya E-igwe kwụ otu ebe
Nkwupụta sitere na iglọ Ọrụ Nchọba okporo ụzọ Danish (AIB) nyochara ihe omume 20 metụtara ụgbọ ala elele na-ebute nnukwu mmerụ ahụ.
Ọ chọpụtara na afọ 'nyere aka' ihe asatọ ahụ merenụ, na ịnya igwe elele na-abụ 'ihe ịma aka' maka ndị agadi na ndị nwere nkwarụ ndị metụtara afọ, na-ekwu na UKikikpsps nke UK.
O doro anya na enweghị njikọ guzobere n'etiti ike ma ọ bụ ọsọ nke e-igwe igwe na ihe merenụ - "Ọtụtụ ndị na-agba ịnyịnya na-agagharị n'okirikiri dị ala mgbe ha na-atụgharị okporo ụzọ, ma ọ bụ ọsọ nke yiri nke anyịnya igwe oge niile" ka akụkọ ahụ kwuru.
Ihe ndị ọzọ so kpata gụnyere enweghị akụrụngwa na-enweghị nsogbu ọ bụla na ebe ndị ihe ahụ merenụ, na enweghị usoro e-igwe na-arụ.
N'agbanyeghị na ịbanye n'ime e-ịgba ịnyịnya igwe bụ ihe nchebe nke ọma ọ dị mma ịbanye n'ụgbọ nchekwa nchekwa nke AIB nke ịbụ onye ejiri igwe kwụ otu ebe pụọ n'okporo ụzọ, na-enyocha mkpokọta yana ikike ịnya ụgbọ n'enweghị nsogbu n'enweghị nsogbu.
A na-adụ ọdụ ka ndị ochie na-agba ịnyịnya bọọlụ jiri nwayọ nwayọ nwayọ ma dobe akpa ha na igwe kwụ otu ebe.
Wtop na-akọ na Spin na-ewebata scooters eletriki siri ike na DC offọdụ n'ime ụdị ndị gara aga dịruru obere ka ọnwa atọ na-ekwu.
June 2019 hụrụ ndị nyocha ọhụụ na-anwale na mmemme pilot na Baltimore 'yana nsonaazụ na-ekwe nkwa maka ịba ụba oke uru na ibelata ụgwọ ọrụ ohi na mmebi.'
O doro anya na 'ndị na-akpụ akpụ nwere nnukwu, taya 10 nke anụ ọhịa, klọb nchekwa na-ebelata mmebi ahụ na ịgbatị ndụ batrị ruo 37.5 kilomita na ụgwọ zuru ezu.'
Mụrụnụ maka ozi ndị ọzọ e-bike na nyocha na ekele maka ọgụgụ!
Oge nzipu ozi: Jan-09-2020